Iyo inoverengeka coronavirus denda iri kuenderera ichipararira, mamwe marapuratifomu ezvekurapa anotanga kushandisa otomatiki rabhoritari washer | Xipingzhe
Iyo inoverengeka coronavirus denda iri kuenderera ichipararira, mamwe marapuratifomu ezvekurapa anotanga kushandisa otomatiki rabhoritari washer.
Chirwere chehosha chakatanga mukati megore ra2020 chine ngozi kuhutano hwevanhu vese. Iyo inoverengeka Coronavirus kubuda kwakakonzera kudarika mamirioni matanhatu hutachiona mupasi rose. Vanopfuura vanhu mazana matatu ezviuru vakafa, uye nyanzvi zhinji hadzina tarisiro yekuti denda richapera munguva pfupi iri kutevera. Kana tikati chirwere muvengi wevanhu vese, saka kune vavengi, kune varwi, kune magamba, kumberi kununura ngirozi dziri kufa magamba, murabhoritari yekutsvaga chirwere uye yekurwisa-denda mishonga yekurapa magamba. zvakare. Zvisinei, kuva gamba hazvirevi kuti zvive nyore. Zvisinei nekutambudzika uye kumanikidzwa kunounzwa nebasa rekutsvagisa sainzi, kuchenesa zuva nezuva kwemidziyo yemarabhoritari kunoda nguva yakawanda nesimba. Uye izvo hazviteedzere mutengo semvura nemagetsi. Nekudaro, nguva ndeyeiyo yakakosha mune iyo CDC mamiriro. Hazvishamise, saka, sezvo COVID-19 ichiri kuramba ichipararira, mamwe marabhoritari ekurapa ari kushandisa zvizere otomatiki marabhoritari mawasher.
Muchokwadi, vanhu vari murabhoritari yenzvimbo yekurapa vanofanirwa kusangana nemapoinzi anotevera pavanosuka marabhoritari, kunyanya magirazi.
1.Kuwedzera kwemamwe marabhoritari anodhura
Zvingave zvakaoma kuti vanhu vafungidzire kuti mhedzisiro yekuyedza inogona kuwanikwa mune isingasviki maminetsi mashoma. Asi kuchenesa midziyo mushure meizvozvo kunotora nguva dzinoverengeka kupfuura kuita kuyedza. Pane yakawandisa nguva mutengo wekuchenesa marabhoritari michina, uye zvakare uine zvimwe zvisiri-zvevashandi mari. Uye zvakare, panguva iyi, munhu wekuchenesa anogona kukonzera kurasikirwa kwemidziyo yekuyedza nekuda kwekusaita hanya uye kusaita zvinoenderana nezvinodiwa. Zvinogona kutokonzeresa kukuvara kwakasiyana siyana kumuviri wemunhu…
2.Cleaning zviyero hazvigone kubatana
Mubazi rekurapa, pese paunoita bvunzo, zvakakosha kuti uwane mhedzisiro chaiyo. Manual kuchenesa haigone kudzora tembiricha yemvura inomhanya, uye haigone kuvimbisa kuchena kwechikepe. Fungidzira uchiedza negirazi isina kuchena, senge inoverengeka Coronavirus? Kunze kwezvo, chimiro cheakasiyana magirazi chakasiyana, uye kuyedza kwakawanda kwakundikana nekuti midziyo haina kucheneswa nemazvo. Ndiani anogona kuve nemhosva kana izvi zvikakonzeresa mukusarudzika kwehutachiona hunobudirira uye kuongororwa kwejekiseni?
3.Kuchenesa maitiro hakuenderane uye kwakaoma kutevedzera
Munguva yenoverengeka yeCoronavirus yekudzidza, mazhinji marabhoritari anotarisira kuvandudza mashandiro ebasa ravo zvakanyanya sezvinobvira kuitira kuti vashande nesimba rekukunda denda nekukurumidza. Izvi zvakare zvinoreva kuti, yekuchenesa nzvimbo, kumanikidza kwemvura uye tembiricha, hutsanana, sipo uye zvimwe zviratidzo zvinofanirwa kugara zvichingoitika. Kuenderana kwechokwadi kusimbiswa kwehutano nharaunda kutevedzera Izvi zviri pachena kuti hazvivimbiswe kuti giraziware rigezwe neruoko.
Neraki, aya mapoinzi ane nzira yekugadzirisa, ndiko kuti kutenga otomatiki rabhoritari wahser. Saka ndeapi mabhenefiti akasarudzika erabhoritari otomatiki washer muchina?
1. Yakashongedzerwa nemhando dzakasiyana dzekuchenesa maitiro, kune dzakawanda zvekuchenesa kusangana.Consistency uye kudzokorora kwekuchenesa mhedzisiro: Glassware inodikanwa kuti icheneswe munzvimbo yakavharika, iine yakatarwa kurongeka, kumanikidzwa kwemvura nguva dzose, kwakajairika kuchenesa kusangana uye kwakakodzera tembiricha yekuchenesa. yekuchenesa kwakarongwa. Yese giraziware mushure mekuchenesa kwakashongedzerwa kunoitika.Panguva imwecheteyo, iyo girazi rinocheneswa ne otomatiki yekuwachisa bhodhoro muchina ine zvakanakira hutsanana hwakakwira, kudzokorora kwakanaka, kugona kwakanyanya, uye data rekuchenesa rinogona kunyorwa zvinoenderana neGMP uye FDA zvinoda Iyo yese yekuchenesa maitiro uye mhando zvinogona kuteverwa, kusiyana nemaoko kuchenesa hakugone kusuka pasi pekupisa kwakanyanya. Iko kushanda kweyakavharwa system zvinobudirira kunodzivirira hutano hwemushandisi.
2.Have kutanga kunonoka basa uye nguva yakachena mashandiro. Sevha mvura nemagetsi, nharaunda.
3.Clean tswanda pani bhandi kuchengetedza kupfeka, ngura kuramba, kuwedzera kwehupenyu hwebasa.
4.Ne basa rekuchenesa mumiriri pombi mukati mekuonekwa kwemhepo, kuverenga kwakaringana kwekuchenesa kusangana
5.ICA module dhizaini, yemahara kuchinjaniswa kwedengu kumira, pamwe nekubatanidza kumisikidza;
6.ITL induction yekumisikidza tekinoroji tekinoroji, kuisa buckle otomatiki kuwedzera.
7.Nemabasa ekuzivisa emabhasikiti, inogona kuchengetedza mvura, magetsi, zvinoshandiswa, kugona uye zvimwe zvinodhura.
Izvo zvinogona kufanofungidzirwa kuti zvizere otomatiki rabhoritari washer inogona kudzikisira kuwanda kwebasa rerabhoritari, zvinonyatso kuvabatsira kuti vatarise kusimbisa kutsvagisa nezvehutachiona nekuvandudza kunyatso uye kushanda kwekuyedza. Zvino zuva rekukunda kwedu kwekupedzisira mukurwisa denda iri harisi kure!
Post nguva: Jun-22-2020